iPhone 7 ayaa la muujiyay: Xanta ayaa la xaqiijiyay oo inbadan ka badan | Waxaan ka socdaa mac
iPhone 7 ayaa shaaca ka qaaday: Xanta ayaa la xaqiijiyay waana inbadan
Applelised | | iPhone, dhowr
Waxaa la yiri wax layaab ahi ma jiri doonaan oo layaab kuma lahaan doono xagga naqshadeynta ama qeexitaannada, xitaa haddii kuwa dambe ay yihiin kuwo la yaab leh. Taasi waxay ahayd sababtoo ah bilihii ugu dambeeyay maanaan joojin ka hadalka qalabkan. Ogaanshaha ku dhowaad dhammaan wararkeeda iyo xaqiijinta inay aad ula mid noqonayso jiilkii hore, adeegsadayaasha iyo qorayaashu xoogaa way niyad jabsan yihiin. Dabcan, iyo in kasta oo aan wax ka faalloon karno qoraallada fikradaha mustaqbalka, iPhone 7 iyo 7 lagu daray waa qalab layaableh, boodbood aad u weyn marka la eego qeexitaannada waxayna la timid muuqaal la mid ah laakiin taasi waxay kaa dhigi kartaa inaad jacayl gasho sidii mid cusub.
Hoos ka ogow dhammaan wararka ku saabsan iPhone-ka ugu fiican ee abid la soo bandhigay iyo walaalkiis ka weyn, oo sameeya, wuxuu ku yimaadaa laba lens oo kamarad ah. Ha moogaan
1 Natiijada cajiibka ah ee loogu talagalay iPhone 7
2 Maxaa ku cusub iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray?
3 Ma lagugula talinayaa inaad iibsato iPhone 7?
Natiijada cajiibka ah ee loogu talagalay iPhone 7
Caqli ahaan, wixii aan horey u fileynay ma ahan inay ina cajabiyaan, runtuna waxay tahay inaysan aheyn inay leedahay astaamo badan ama waxyaabo aan la fileynin, laakiin wali waxaan ka hadli karnaa layaabka in midabka isbeddelka uu ula jeeday soo bandhigida moodooyin cusub madow. Madow Piano ayaa naga yaabiyey, inkasta oo mar horeba lagu xamanayay iyo xitaa saacad ka hor soo bandhigga, koontada rasmiga ah ee Apple ayaa si khalad ah ugu dusisay astaamaheeda. Hoot ka imanaya goobta shaqada oo durba la eryi doono ..
Naqshad ahaan ma noqon doonin tii ugu cusleyd, laakiin hadda waxay awoodi kartaa inay la sii wado jirka aluminium ee aan ku aragnay iPhone 6. Waxay noqon doontaa sannadka 2017 markay naga yaabaan muuqaal dhammaystiran oo is beddelay. Jiheeyaha dambe ayaa si wax ku ool ah loogu wareejiyay geesaha si looga tago jirka dambe ee jilicsan oo nadiif ah. Kaamirada ayaa xoogaa koraysa moodalki lagu darayna wuu labanlaabmayaa, dabcanna waxaan ku raaxeysaneynaa codadka caadiga ah iyo midka cusub. Dahab, Dahab Dahab ah, Qalin iyo Waxkale.
Hadda waxa na xiiseynaya ayaa ah qeexitaannada, howlgalka, kamaraddiisa cajiibka ah iyo xooggeeda weyn. Ka hoos eeg dhammaan barta ay wararka ku muujinayaan.
Maxaa ku cusub iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray?
Labada lens iyo kamarad hagaagsan ayaa ah barta adag telefoonka. Hadda waxay noo oggolaan doontaa oo keliya inaan sawirro ka qaadno iyo fiidiyowyo tayo sare leh, laakiin sidoo kale inaan sameyno muuqaal dhaweyd oo aan caadi ahayn, sooyaal cilladaysan iyo diiradda siyaabo hagaagsan iwm Isbeddel muhiim ah oo aan dhammaanteen ogaan doonno.
Awood dheeri ah oo ay ugu mahadcelineyso A10 chip iyo koror batari weyn.
Badhanka Guriga cusub. Isbeddel ay isticmaaleyaashu ogaan doonaan wax badan. Hadda waxay la timid 3D Touch. Annaga ahaan waxay noo noqon doontaa sida taabashada shaashadda, laakiin in yar ka hooseysa meel wareeg ah oo leh Taabasho Taabasho ah.
Biyo ma galeen. Ugu danbeyn. Waan ka qaylinaynay oo durba waxaa lagu xaman jiray inay imaanayso. Iyo waliba boodh.
Waxaad ku arki kartaa naqshada iyo midabada sawirada. Sida aan uga faallaynay dhowr cutub oo kor ku xusan. La mid ah, oo leh dhowr midab oo cusub iyo cabirro isku mid ah. Waa isbeddel gudaha ka badan kan dibadda. By the way, nabad gelyo dekedda headphone iyo hello AirPods ama adapters.
Kaydinta oo badatay
Shaashad ifaya oo leh midab ballaadhan.
Tilmaamo software gaar ah.
laba ku hadla, laakiin mid korka ku yaal iyo mid hoose, oo yaab leh iPhone-ka.
ma jirto deked headphone ah, sidii horeyba loogu xaman jiray. Waa inaad ku xidhataa EarPods-ka cusub hillaaca, ama adabtarada. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa AirPods kacaan ah oo kalyaha ku kici doona.
Waxaana laga yaabaa inay leedahay astaamo kale oo aysan noo magacaabin, xumaan iyo samaanba. Waxaan ku arki doonnaa tijaabooyinka ugu horreeya ee iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray, marka ay si dhakhso leh u iibiso. Waad keydin kartaa hada.
Ma lagugula talinayaa inaad iibsato iPhone 7?
Haa, Waxaan aaminsanahay haddii aad haysatid iPhone 4, 5 ama xitaa 6, inaad dareemi doontid isbeddelka jiilba jiil kale, iyo in ka badan oo leh koror ballaadhan oo ku yimaada awoodda batteriga iyo kamaradda ay u baahan tahay. Dabcan, haddii aad haysatid iPhone 6s ama 6s oo lagu daray markaa kuma talinayo. Aniga tusaale ahaan Waxaan haystaa 6da mana qorsheynayo inaan cusbooneysiiyo iPhone-keyga illaa jiilka soo socda ugu horrayn, oo noqon doonta sanadguuradii XNUMXaad waxaana lagu xantaa inay tahay mid layaableh.
Hal dariiqo ama mid kale, waxaan u maleynayaa inay tahay iPhone-kii ugu fiicnaa ee aan abid aragnay waana ku talinayaa. Waa inaan aragnaa waxa isticmaalayaashu u maleynayaan mar uun inay ku raaxeystaan. Sidoo kale ogow warka Apple Watch 2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » iPhone 7 ayaa shaaca ka qaaday: Xanta ayaa la xaqiijiyay waana inbadan
Ugu dambeyntiina, iPhone 7 iyo 7 Plus ayaa naga mid ah waana sidan
Dhammaan wararka IOS 10 ayaa lagu soo bandhigay qodobka muhiimka ah